Why cannot use Wireless in Ubuntu 11.04? — MYSTERY ZILLION
Why cannot use Wireless in Ubuntu 11.04?
မနေ့က Ubuntu ကို Upgrade လုပ်လိုက်တာ Wireless မရတော့ ဘူး။ ပြီးတော့ Network မတတ်ထားရင် Ubuntu က တက်မလာတော့ဘူး စာတန်းတွေဘဲပေါ်လာတယ်.....<div>ကူညီကြပါ။။။</div>
upgrade လုပ်တာကဒီလိုပဲဗျ။ ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။ အမှန်မှန်က upgrade လုပ်မယ့်အစား clean install လုပ်သင့်တာ ကိုယ်သွင်းထားတဲ့ program တွေပါပြန်လိုချင်ရင်တော့ backup လုပ်ထားပေါ့။ ဒီတိုင်း backup မလုပ်ချင်ရင်လည်း script လေးရေးတာဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်ကရှာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ <br>
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Ubuntu forum မှာ bug report လုပ်ပါ။ Wireless Driver ကို support မလုပ်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ဗားရှင်းတွေ တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလဲ ဖြစ်နေတုန်းပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ update release လုပ်တိုင်း update လုပ်ပါ။ update တွေက အဲ့လို ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။။ <br>
try <div><br></div><div>$sudo apt-get update</div><div>$sudo apt-get upgrade</div><div><br></div><div>it may automatically detect and will install. but not sure. I don't recommend upgrade in Ubuntu. Clean install is the best.</div>
Now My wireless is ok on Ubuntu.<br>I did <br>
$ sudo rmmod acer_wmi
အမြဲ​တမ်း ပြန်​ရိုက်​နေ​ရ​တယ်.. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?<br>
S<meta charset="utf-8"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma; font-size: 12px; ">ystem>preferences>sessions မှာ သွားထည့်ထားလိုက်ရင် ရမယ်။</span>